किमलाई फेरि अमेरिकासँग वार्ता गर्न मन लाग्यो
एएफपी , ३० चैत्र २०७५, शनिबार, ०२:२७ pm
सोल । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आर्को अर्थात् तेस्रो चरणको वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको समाचार छ । उत्तर कोरियाली नेता किमले आफू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
उनले यदि अमेरिका सहीरुपमा प्रस्तुत भएर वार्ताको टेबलमा बस्छ भने , आफू अर्को चरणको वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको बताएका हुन् । उत्तर कोरियाली नेता किमले यस वर्षको अन्त्यसम्म पनि आफूले अमेरिकाको एक साहसहिक निर्णयको लागि पर्खिबस्ने धारणा राखे ।
त्यस्तो साहसिक निर्णय अर्को बैठकबाट पनि आउन सक्नेतर्फ इंगित गर्दै किमले यदि अमेरिका सही मानसिकताका साथ वार्तामा बस्ने हो भने त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनीहरुबीच केही महिनामात्र अघि भियतनामको हनोइमा पछिल्लो अर्थात् दोस्रो चरणको बैठक भएको थियो । तर त्यस बैठकमा भने उत्तर कोरियाली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच कुनै निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।
कुनै निर्णय अथवा सहमति नभएको भएता पनि वार्ता सकारात्मक भएको अमेरिका र उत्तर कोरियाले बताउँदै आएका छन् । यसैबीचमा आफू फेरि अर्को वार्ताका लागि पनि तयार रहेको धारणा किमले राखेको समाचारमा जनाइएको छ ।
गएको फेब्रुअरी महिनामा भियतनामको राजधानी हनोइमा भएको दोस्रो चरणको बैठकले वास्तवमा अमेरिका उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकारात्मक छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न पनि उठेको नेता किमले बताए ।
उनले शनिबार उत्तर कोरियाको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– हनोइ वार्तामा केही सहमति भएन तर वार्तालाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन । तर पनि अमेरिका उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धलाई थप विस्तारित गर्न साँच्चिकै इच्छुक छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रश्न भने उठेको छ ।
सोही सम्बोधनकै क्रममा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आफ्नो सम्बन्ध भने बलियो रहेको बताएका थिए । किमले भने– मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग राम्रो सम्बन्ध छ, हामीले जुनबेला आवश्यक ठान्छौँ त्यतिबेला एक आपसमा चिठी लेख्न पनि सकेका छौँ, लेखेका पनि छौँ ।
उनीहरुबीच यसअघि दुई चरणमा वार्ता भएको छ । पहिलो चरणको वार्ता गत वर्षको जुन महिनामा सिंगापुरमा भएको थियो भने अर्को वार्ता यसै वर्षको फेब्रुअरीमा भियतनाको राजधानी हनोइमा भएको हो ।
पहिलो चरणको वार्तामा उत्तर कोरियाली आणविक अस्त्रको होडबाजी रोक्ने र पारमाणविक उत्पादनहरुलाई रोक्ने विषयमा सहमति भएको भए पनि दोस्रो चरणको हनोइ बैठकमा भने त्यस्तो केही सहमति भएको थिएन ।
तर दोस्रो चरणको बैठकमा पनि फेरि अर्को चरणको वार्ता भने गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो । सोही बमोजिम उत्तर कोरियाली नेताले यो प्रस्ताव गर्नुभएको अनुमान गरिएको छ ।
उत्तर कोरियासँग बैठक बस्न ठाउँ खोज्दै अमेरिका
ट्रम र किमबीचको वार्ता विना सम्झौता टुङ्गियो, तेस्रो शिखर बैठक पनि नहुने ट्रम्पको भनाई
पुटिन र ट्रम्प अर्को वर्ष शिखर बैठक बस्ने
एमसीसी पास गर्ने सर्तमा अग्नि सापकोटा सभामुख !
माघ १५ र १६ गते अन्तरकलेज फुटसल प्रतियोगिता हुँदै, ३२ टिम सहभागी हुने
एक लाख ५० हजार घुस खाने खरिदार बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
आगामी दुई वर्षभित्र भन्सार प्रणालीलाई कागजविहीन बनाइने, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने
कहाँ पुग्यो रानीपोखरीको पुनर्निर्माण ? (फोटो फिचरसहित)